September 2021 - SonSon LinLin
[ October 21, 2021 ] ချစ်သူမိန်းကလေးမှာ မိဘပေးစားသော သူဌေးသားကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ရာ မင်္ဂလာပွဲတွင် အသဲကွဲသီချင်းလေးသီဆိုကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့သော ကောင်လေး	ၾကားသိသမၽွ
[ October 21, 2021 ] ၀က္ၿခံ တင္းတိတ္ အမာ႐ြတ္နဲ႔ အဆီဖုေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရရင္	အလွအပေရးရာ
[ October 21, 2021 ] အိမ္မွာစိုက္မိရင္ လူခိုက္တတ္တဲ့ ဂမုန္း (၃) မ်ိဴး	Knowledge
[ October 21, 2021 ] ေမြးေန႔ ပိုင္ရွင္ေလးမ်ား အေၾကာင္း	Knowledge
[ October 21, 2021 ] ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု	အခၽစ္ေရးရာ
ခိုးပြေးခံရတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ လာတောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး ကွာခြားချက်…
September 9, 2021 sonsonlinlin 0
ခိုးပြေးခံရတဲ့ မိန်းကလေး နဲ့ လာတောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး ဘာကွာလဲ သိချင်သူများအတွက် ခိုးပြေးလို့ လက်ထပ်ရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုးနဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ် လူကြီးစုံရာနဲ့ တင်တောင်းခံရတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်တန်ဖိုး ဘယ်လိုမှ မတူနိုင်ဘူး။ ပစ္စည်းတောင်မှ သူ့တန်ဖိုး အလျောက် ဈေးကြီးပေးဝယ်တာနဲ့ ခိုးပြီးအလကားရတဲ့ ခိုးရာပစ္စည်း တန်ဖိုးအသီးသီးရှိတာပဲ ။ နောက်တစ်ချက် ကိုယ့်ကိုလာတောင်းလို့ ကိုယ့်ဘက်က သူနဲ့ စည်းမကျော်ထားဘူးဆို မိန်းကလေးဘက်က ကိုယ့်မိဘ မျက်နှာ မငယ်ရဘူး […]
ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင်၊ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောကရောက်နေလျှင်…
ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေလျှင်၊ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောကရောက်နေလျှင်… ပိုက်ဆံချေးပြီး ဆုံးမလိုဖြစ်နေတာ၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် စိတ်သောက ရောက်နေရတာမျိုး ကြုံနေသူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် …။ ရစရာရှိသူ ငွေချေးထားသည့် ငွေရှင်သည် တနင်္ဂနွေသားသမီး ဖြစ်ပါက မွေးနေ့ နေ့လည် (၁၂)နာရီ မှ (၁)ခွဲအတွင်း အိမ်ဘုရား၌ ကံကော် ၂ ညွန့် အမွေးတိုင် (၃) တိုင် ဖယောင်းတိုင် (၃) တိုင် ကပ် လှူ ပါ …။ […]
မျက်နှာလေးဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ…
မျက်နှာလေးဝင်းမွှတ်နေဖို့ ပိုက်ဆံမကုန်တဲ့ ပေါင်းတင်နည်းလေးပါ… အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို ကုန်စုံဆိုင်တွေ အလှပြင်ဆိုင်တွေမှာ တကူးတက ရှာစရာမလိုပါဘူး။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ အလှအပ ပစ္စည်းတွေပါပဲ …။ အမျိုးသမီးတိုင်း နူးညံ့ပြီး လှပစိုပြေတဲ့ အသားရေမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့လား။ သိပ်သေချာတာပေါ့။ အသားအရေကိုနုပျို စိုပြေစေဖို့ ဂျပန်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဒီကနေ့မှာ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်နော်။ အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး တကယ်လည်း […]
သင့္ရဲ့လက္သန္းေလးမွေျပာျပေသာ သင့္ရဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားကဘာေတြလဲ…ဝင္ဖတ္ၾကည့္လိုက္
သင့်ရဲ့လက်သန်းလေးမှပြောပြသော သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကဘာတွေလဲ…ဝင်ဖတ်ကြည့်လိုက် လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖဝါးက သူ့ဘဝ အကြောင်းတွေနဲ့များစွာပတ်သက်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ခဲ့ ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တိို့ဆီမှာလည်း လက္ခဏာ ပညာရပ်က ထင်ရှားတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်လက်က ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးရင် အဖြေတွေကို တစ်ပုံချင်းစီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မြိုသိပ်လွန်းသူ (A) ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို လူတွေမသိအောင် ဟန်ဆောင်ဖုံးကွယ်ထားချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။လူတွေက သင့်ကို အားငယ်တတ်သူ တစ်ယောက်လို့ ထင်မှာကို စိုးရိမ်နေတယ်။ ပွင့်လင်းသူ […]
(၃)ရက္တည္းနဲ႔ က်ယ္ေနတဲ့ေခြၽးေပါက္ေတြ အကုန္က်ဥ္းေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း…
(၃)ရက်တည်းနဲ့ ကျယ်နေတဲ့ချွေးပေါက်တွေ အကုန်ကျဉ်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း… (၃)ရက်လေးပဲ လုပ်ရမှာဆိုတော့ လုပ်ပျော်တာပါတယ်။ ချွေးပေါက်တွေဆိုတာကလည်း ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ Skin care သုံးသုံး မူလအသားအရေအတိုင်း ပြန်ပိတ်သွားတယ် ဆိုတာက ရှားပါတယ် …။ လွယ်လည်း မလွယ်ပါဘူး။ သေချာ ဂရုစိုက်နိုင်မှပါ၊ အချိန်တော်တော်ကြာအောင် Skin care အဆင့်အဆင့်ကို နိုင်နိုင်လုပ်နိုင်မှ ရလဒ်ကောင်းလေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဆိုတော့(၃)ရက်တည်းနဲ့ ချွေးပေါက်အကုန်ကျဉ်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးက ဘယ်နည်းလမ်းဖြစ်မလဲဆိုတာ ရှာဖွေလိုက်ကြရအောင် …။ […]
ေငြကုန္သက္သာၿပီး သဘာဝအတိုင္း ဆံပင္သန္ေစ၊နက္ေစမယ့္ နည္းလမ္း….
ငွေကုန်သက်သာပြီး သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်သန်စေ၊နက်စေမယ့် နည်းလမ်း…. မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေ တို့ရေ…ဆံပင်တွေဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဒုတိယ မျက်နှာလို့ ဆိုရလောက်အောင် အရေးပါပါ တယ်။ ဆံပင်လေး သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဖီးစတိုင်ကျကျ ညှပ်ထားတဲ့ အခါ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု တိုးစေသလို မြင်ရသူတွေ အတွက်လည်း ဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ရှိ စေတာပါ …။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေမှာတော့ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ဆံပင်မသန် တာတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေကြရပါတယ်။ အဆိုပါ လူတွေ […]
အနာဂါတ္ ခ်စ္သူကို သိရွိနိုင္တဲ့ သင့္ လက္ဖဝါး
အနာဂါတ် ချစ်သူကို သိရှိနိုင်တဲ့ သင့် လက်ဖဝါး No (1) အမျိုးအစား။ နံပါတ် (1) ပုံထဲကလို ဘယ်လက်ရဲ့ နှလုံးလမ်းကြောင်းက မြင့်ပီး ညာလက် နှလုံးလမ်းကြောင်း က နိမ့်နေသူတွေကတော့ သတ္တိ ရှိတယ်၊ ထက်မြတ်တယ် ။ စိန်ခေါ်မှု တွေကိုလည်း ချက်ချင်း ရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေ ပဲဖြစ်ပါတယ် …။အချစ်ရေး မှာလည်း အစွဲအလန်းကြီးတဲ့ သူတွေဖြစ်ပီး ငယ်ရွယ်တဲ့ ကောင်လေး ချောချော ကောင်မလေးချောချော […]
ခႏၶာကိုယ္မွာ လိပ္ျပာေတြလာနားရင္ သတိထားပါ
ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိပ်ပြာတွေလာနားရင် သတိထားပါ အရောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးရှိပြီး ချစ်စရာအသွင်ရှိကြတဲ့လိပ်ပြာလေးတွေ ပန်းလေးတွေပေါ်ဝဲပျံနေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါ မကြည်နူးတဲ့လူရယ်လို့မရှိပါဘူး။ လူတော်တော်များများကလိပ်ပြာတွေဟာ ပန်းဝတ်ရည်ကိုသာစုပ်ယူစားသုံးတယ်လို့သိကြတာပါအမှန်တော့ လိပ်ပြာမဖြစ်ခင် ခူကောင်ဘဝမှာ သစ်ပင်ကအရွက်တွေကိုစားပြီးကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီး လိပ်ပြာဘဝမှာ ပုရွက်ဆိတ်ငယ်တွေ ပိုးမွှားတွေနဲ့ ပုပ်သိုးဆွေးမြေ့နေတဲ့တိရိစ္ဆာန် တွေ ၊ အသီးအရွက်တွေကိုသာမက တိရိစ္ဆာန် တွေရဲ့မစင်အပေါ်မှာပါ နားခိုပြီးစားသုံးကြတယ်လို့သိရပါတယ် လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၆သန်းနဲ့ချီပြီးဖြစ်တည်နိုင်ပါတယ်လိပ်ပြာတွေဟာ ပန်းဝတ်ရည်တွေကိုစုပ်ယူစားသုံးပေမယ့် သူတို့အတွက်အာဟာရမလုံလောက်တဲ့အခါ အခြားနေရာတွေကနေ ဆားဓာတ်ရရှိဖို့ စုပ်ယူကြတယ်လို့သိရပါတယ် ဒါ့ကြောင့် လိပ်ပြာလေးတစ်ကောင် ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်လာနားနေပြီဆိုရင်တော့ သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ဟာ […]
ဖုန္းေငြျဖည့္ ကဒ္မ်ား ခဲျခစ္လြန္သြားၿပီး ပင္​နံပါတ္​မ်ားပ်က္​ကုန္​ရင္​ လႊင္မပစ္​ၾကပါနက္
ဖုန်းငွေဖြည့် ကဒ်များ ခဲခြစ်လွန်သွားပြီး ပင်နံပါတ်များပျက်ကုန်ရင် လွှင့်မပစ်ကြပါနက် ပြန်သုံးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေး အသိပေးပါရစေ ငွေဖြည့် ကဒ်တိုင်းရဲ့ ဘေး ဘားကုတ် အောက်တွင် နံပါတ်များ ပါ ပါသည် ၊ ပုံတွင်ပြထားသည့် အတိုင်း ဘားကုတ်ရဲ့ အောက် 160….နှင့် စသော နံပါတ်ကိုဖတ်ပြပြီး သက်ဆိုင်ရာ Call Center များ သို့ ဆက်သွယ်၍ ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ် 👍 Sim ကဒ် 3ခု့ရဲ့ Call […]
သင္ဟာ ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆိုတာ သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ စက္ဝိုင္းကတစ္ဆင့္ ေျပာျပမယ္
သင္ဟာ ဘယ္လိုလူစားမ်ိဳးလဲဆိုတာ သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ စက္ဝိုင္းကတစ္ဆင့္ ေျပာျပမယ္ နံပါတ္ ၁ သင္ဟာ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ သြက္သြက္လက္လက္ ေနတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။ မိမိေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြကို ေရာက္ေအာင္သြားခ်င္စိတ္ ျပင္းျပေနတဲ့အတြက္ ဘယ္အလုပ္ကိုမဆို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ အာ႐ုံစူးစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူေတြရဲ႕ခ်ီးက်ဴးျခင္း၊ အားက်အတုယူျခင္းကို ခံရတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြအျမင္မွာေတာ့ သင္ဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္ ျပင္းျပတယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သင္ဟာ အႏိုင္ရတာကို ႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ပါ။ မိမိတတ္ႏိုင္သေလာက္ အခြင့္အေရးေတြကို ရေအာင္ယူတတ္ၿပီး […]
ချစ်သူမိန်းကလေးမှာ မိဘပေးစားသော သူဌေးသားကို ရွေးချယ်ပြီး လက်ထပ်ခဲ့ရာ မင်္ဂလာပွဲတွင် အသဲကွဲသီချင်းလေးသီဆိုကာ ဂုဏ်ပြုပေးခဲ့သော ကောင်လေး
၀က္ၿခံ တင္းတိတ္ အမာ႐ြတ္နဲ႔ အဆီဖုေတြေၾကာင့္ စိတ္ညစ္ေနရရင္
အိမ္မွာစိုက္မိရင္ လူခိုက္တတ္တဲ့ ဂမုန္း (၃) မ်ိဴး
ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ ဦးအရွယ်နဲ့ ချစ်သူဖြစ်ရခြင်း၏ ကောင်းကျိုး (၇)ခု